နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: iPhone Trick for Un-JailBreaked
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:44 AM
khin oo may February 25, 2010 at 6:25 AM
သက်ဝေသည်..လိုက်မလုပ်ပါ. ဖုံးဖြင့် ပြောပြလည်းနားမလည်မှာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာမျက်နာ ၁၆ လည်းသူ့အတွက် မလိုအပ်ပါ. ဘလော့ဖတ်လို့ရလျှင် ပျော်နေလောက်ပါပြီ။ ဘရိတ်ဘဲ လုပ်ပေးလိုက်ပါရန်။
TZA February 25, 2010 at 7:44 AM
မိုက်တယ်... စမ်းကြည့်အုံးမယ်.. လောလောဆယ် ၁၁ မျက်နှာတောင် မပြည့်သေးဘူး။
Myo Kyaw Htun February 25, 2010 at 2:47 PM
ae laukamyarr gyee ... bar loat tone nay dar lae? :D
naungthu February 26, 2010 at 12:27 AM
များတာနည်းတာ သုံးတာ မသုံးတာ သူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး .....သူများရွရင် လိုက်ရွဖို့သာ သူ့အလုပ်
သက်ဝေ February 26, 2010 at 4:02 PM
မမ လူနောက်...း))
ကိုလူထွေး February 27, 2010 at 4:20 AM
puluque February 27, 2010 at 12:42 PM
ဒီနည်းကို မသိသေးဘူးဗျ လောလောဆယ်တော့ ၁၀မျက်နှာရှိတယ်
galoonman February 27, 2010 at 5:13 PM
MrDBA February 28, 2010 at 5:03 PM
ပထမဆုံး စာမျက်နှာမှာ အပလီကေးရှင်း အပြည့်မရှိလဲ လုပ်လို့ရပါကြောင်း၊ အိုင်ပေါ့များမှာလဲ လုပ်လို့ရပါကြောင်း .. ထပ်ကာထပ်ကာ ရွှေ့ရွှေ့သွားခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာများ ..အမှန်တကယ်ပင် တိုးပွားလာပါကြောင်း ..
MrDBA February 28, 2010 at 5:04 PM
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာကနေ စလုပ်လျှင်လဲ ရ၍ ပိုမိုလွယ်ကူပါကြောင်း :P